Asafufusa Archives | Umbele
UNksz uNonhlanhla Manganye umnikazi weKushinda Caterers nocija abapheki
Ugxile ekuphekeleni abethelevishini nasekufundiseni ukupheka osethole ubizo lwakhe ekhishini emva kokungqubuzeka izikhawu ezimbalwa ephemba amabhizinisi. Uxoxe noZANELE MTHETHWA
UKUKHULA edla ukudla okuphuma ensimini yakubo kutshale uthando lwebhizinisi lokudla kuNksz uNonhlanhla Manganye, oseqeqesha abapheki.
UDkt uNikiwe Buthelezi-Majola wenza izicathulo ngezandla
Usheba ubudokotela nokuthunga izicathulo. Uxoxe noZIMBILI VILAKAZI ngala mawele awancelisayo
IPHUPHO lakhe elikhulu wukuthi ngelinye ilanga abone umsebenzi wakhe wezandla usudayisa ezitolo ezinkulu ezweni lonke kanjalo nakwamanye amazwe.
UNksz uNompumelelo Mtshali we-599 Foods Services
Ukusheshe azuze impumelelo kumlimazile kodwa futhi leso sifundo yisona asesisebenzisa ukukhulisa ibhizinisi lakhe lokubhaka elisimamayo. Ulandise USLINDILE KHANYILE
NGEMVA kokudilizwa emsebenzini wasungula inkampani yokudla eyaqala igxile ezikhaftinini zabantwana nokwalandelwa wokugcina esephekela imicimbi yezinkampani ezinkulu.
UNksz uRefiloe Mocwa uyasimama kwezemfashini
IGAMA elithi Refiloe Mocwa liyakhula kwezemfashini futhi izimpahla zalo ziyahlonishwa njengoba kukhona ngisho nezokulala zikaNokusho
UNksz uZintle Mkize umsunguli weWines & Spirits Stories
WONKE amabhizinisi anendaba ethile ngokusungulwa kwawo. Kunjalo nangebhizinisi lentokazi ewumsunguli webhizinisi elisabalalisa iwayini nogologo iWines & Spirits Stories.
UMA ufika e-Uhuru Shopping Centre, inxanxatheleni yezitolo eClermont, eThekwini, uzozithela emabhizinisini ajwayelekile ezindaweni zabantu njengesitolo nendawo yokucwala izinwele. Kodwa kunolunye uhlobo lwamabhizinisi ozoluthola kule ndawo eqanjwe ngegama le-nightclub eyake yanedumela “eSkomplazi” namaphethelo eTheku, eliyisiSwahili nelisho ukuthi “inkululeko”. Kule ndawo uzothola isitolo samakhekhe ekhethelo, phecelezi ama-novelty cake, isitolo esikhanda amakhompyutha nendawo ebhucunga necwala abantu besifazane.
OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele bathi begxilile ekukhuliseni amabhizinisi abawathandayo kodwa bathole nokunye okuzongenisa imali ngesikhathi besaphemba; ukugwema ukuwa kwamabhizinisi abo
Umpheki uNksz uNomvuyo Gwamanda akazithambisi ngethuba elivezwa wukuba ngumuntu omusha
EMVA kweminyaka kuwumsebenzi awenza eceleni ngoba ubesaqashiwe, uNksz uNomvuyo Gwamanda uqunge isibindi kulo nyaka wakhetha ukugxila enkampanini yakhe yokudla, iDelicious Lab ezinze eGoli, eGauteng.